Mayelana NATHI - Arex Industrial Technology Co., Ltd.
I-Arex Industrial Technology Co., Ltd.
Inkampani ye-Arex Industrial Technology yatholakala ngo-1995, yaba ngumhlinzeki ohola phambili ozimele wezimboni. Njengoba sihlanganyele namafemu kulo lonke elaseChina ukuletha ubudlelwano nabaphakeli abenza kahle kakhulu. Okuqale njengebhizinisi elincane lokulungisa imishini elinombono wokusiza abanye baphumelele kanye nentshisekelo yokuxhasa imboni, selikhule neqembu elizinikele lokukhulisa nokusebenzela ngezindlela ezintsha, ezingcono nezingefani. Ikakhulukazi, i-Arex imele inkampani yeBaytain yerabha nepulasitiki esebenza ebhizinisini lamazwe omhlaba futhi njengoba iwindi elihlukile ekumaketheni komhlaba. I-Baytain njengomkhiqizi wendabuko wemikhiqizo yenjoloba kanye nepulasitiki eChina cishe iminyaka engama-30, egxile kakhulu ekuhlinzekeni ngemikhiqizo emelana nezimayini. Zombili lezi zinkampani zingebhodi labaqondisi elilodwa. Zonke izinsizakusebenza zabelwana zona. (Ukuthola eminye imininingwane ngeBaytain: www.baytain.com)
I-Arex ingumkhiqizi, umhwebi, umenzi wezinto, umakhenikha, ongenisa impahla ezweni futhi osabalalisa izinto zezimboni, imishini nezinye izidingo nezidingo zezimboni. Sinethuba lobambiswano obuhle nabanye abakhiqizi be-premium abakhonza ngendawo ehlukene yebhizinisi eChina isikhathi eside. Kutholakele ukuthi ayihlinzeki nje kuphela ngezidingo esezivele kodwa ingasebenza nezinye izidingo ezihlobene nezimayini kanye nebhizinisi elenziwa ngomshini. Sinokuqonda okujulile ngezidingo nezinselelo zethu zamakhasimende nezimboni. Sihlala sicabanga phambili ngokuxazulula izinkinga ngokuqinile futhi siqede izinkinga futhi sihlose ukungalokothi sishiye amakhasimende ethu engabaza. Ukuxhuma izimboni ochwepheshe ngemikhiqizo ehamba phambili emhlabeni, sithola futhi sinikeze uhla olubanzi lwemikhiqizo yenjoloba, ipulasitiki nensimbi ngenhloso yezimboni nezisombululo zezimayini. Ngokusebenzisa izeluleko zethu zezicelo zobuchwepheshe kanye nezixazululo eziphelele zokuphathwa kwempahla sithole ukwethenjwa nokusekelwa kwamabhizinisi amaningi omhlaba wonke enkampanini yezimayini kanye nemboni ehlobene nayo.
I-Arex idala ukubambisana impilo yonke ngokutshala isikhathi ekwakheni nasekuphakamiseni izixazululo ezenziwe zaba ngezakho ukuze zihambisane nezidingo zebhizinisi ngalinye. Ukusebenza ngokubambisana namakhasimende ethu ekwakheni imiphakathi echumayo, enempilo futhi esimeme.
Asizibheki njengomunye umphakeli ngoba lokho akuyona nje into esiyikho; singabalingani bebhizinisi, sizibophezele ekuthuthukiseni uhambo. Ubungani buyenziwa, futhi ubudlelwano buyakhiwa - Sebenzani ndawonye, ​​winani ndawonye futhi nigubhe ndawonye.
Enqubweni yentuthuko, i-Arex ishintshane futhi yabambisana neminyango eminingi yamazwe omhlaba kanye nezikhungo zocwaningo. Kusisizile sathuthukisa amakhono wethu wokuklama, ukukhiqiza, ukugcinwa, ukukhishwa kanye nokulungiswa kobunjiniyela. Ukukhuthaza i-Arex enkampanini yokuqala yebanga lomhlaba yemikhiqizo yenjoloba nemikhiqizo ye-polyurethane, efanelekile kuyo yonke imikhiqizo ekhona yomshini wokulungiselela endaweni yezimayini.
Imboni ye-Arex igxile ekufezeni ubuhle ekwakhiweni, ekwenziweni nasekunikezelweni kwezixazululo ezingamelana nokugqwala, izingxenye futhi ezihambisana nemishini yokulungiselela izimayini. Sinikeza ngezixazululo zenjoloba yangokwezifiso nezisombululo ze-polyurethane zezimayini ezinzima nezicelo zezimboni ezidinga indlela entsha. Siyaqiniseka ukuthi imikhiqizo yethu ikhwalithi nentengo yokuncintisana kuzoba nomthelela omuhle kumakhasimende ethu. Inhloso yethu ukuba ngumkhiqizi wakho omuhle kakhulu wezisombululo zezimayini nezimboni.
Umbono ka-Arex ukuthi ube ngumthombo othembekile, ogxile ezixazululweni zenjoloba yangokwezifiso nezisombululo ze-polyurethane endaweni yezimayini ezinzima nezimboni emhlabeni.
Ake siqede ukucindezeleka nobunzima besitoko esisebenzisekayo. Izinqubo zethu ezintsha zenza ukuhlelwa kabusha nokugcina ithrekhi ilula.
Hlala uxhumekile ngokusobala okuphelele, sinesifiso sokuthi ukuxhumana okuqinile kwenza ubudlelwano obuyimpumelelo.
Siyazi ukuthi amakhasimende ethu adinga izimpendulo ngokushesha, siyashesha futhi siyasebenza ekuphenduleni kwethu.
Kungani kufanele ulinganiselwe? Sitshala isikhathi sethu ukuthola lokho okudingayo.
Ake sikusize! Siyaziqhenya ngokuba nabachwepheshe bemboni esiseduze ukuthola isisombululo esifanele ngaso sonke isikhathi.